Munaasabad Casho Sharaf Ah Oo Xalay Muqdisho Loogu Sameeyay Wafti Ka Socda Eritrea Oo Ku Sugan Soomaaliya – somalilandtoday.com
Munaasabad Casho Sharaf Ah Oo Xalay Muqdisho Loogu Sameeyay Wafti Ka Socda Eritrea Oo Ku Sugan Soomaaliya
(SLT-Muqdisho)-Munaasabad casho sharaf ah ayaa xalay magaalada Muqdisho loogu sameeyay wafdiga dalka Eritrea ka socda ee uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda Cusmaan saalax iyo la taliyaha Madaxweynaha Eritrea Yemane Ghabreab.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) ayaa casho sharafta ugu sameeyay wafdigan xarunta dowladda Hoose, waxaana goobjoog ka ahaa Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, Wasiirka Arrimaha Dibadda Axmed Ciise Cawad iyo xubnaha labada gole ee dowladda.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyey taariikhda magaalada Muqdisho ay u leedahay soo dhaweynta iyo marti gelinta Madaxda caalamiga ah ee booqashada ku yimaada Soomaaliya, isagoona sheegay in munaasabaddan ay ka tarjumeyso dib-u-kabashada dalka iyo sida uu u soo kobcayo amniga Caasimadda.
“Magaalada Muqdisho waxa ay astaan u tahay dawladnimada iyo midnimada shacabka Soomaaiyeed. Dhammaanteen waxaan xasuusannahay sida ay ugu soo hiran jireen Madaxda Afrika iyo guud ahaan caalamka, maantana waxaa muuqata ifafaallo ku saabsan in maqaamkaasi uu u soo laabanayo caasimadda.”
Sidoo kale Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Eritrea Cusmaan Saalax ayaa uga mahad celiyey Duqa Caasimadda soo dhaweynta sare ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa, waxa uuna sheegay in uu ku faraxsan yahay sida ay Soomaaliya uga soo kabaneyso bur burkii ku dhacay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea ayaa tilmaamay xiriirka ka dhaxeeya labada shacab iyo sida ay dhaqan wadaagta u yihiin, isagoo u rajeeyey shacabka Soomaaliyeed horumar iyo barwaqo.
Waxaa uu sheegay in wafdigooda oo labo cisho ku sugnaa magaalada Muqdisho ay ka ambabixi doonaan maanta oo Arbaco ah, isla markaana ay dhowaan dib u soo laaban doonaan.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa sheegay in Shacabka Eritrea ay wadaagaan dhaqan iyo midab, isagoo xusay in Wasiirka Arrimaha Dibadda Eritrea in Muqdisho ku hoydo labo cisho ay ka turjumeyso dib u soo kabashada Soomaaliya iyo nabadda caasimadda Muqdisho.